Mpɔtɛm 9,984,670 km²
Nnipa dodoɔ 38,526,760 ab. (2022)
Canada yɛ ɔman bi a ɛwɔ Amerika Atifi fam. N’amantam du ne nsasesin abiɛsa no trɛw fi Atlantic Po no mu kosi Pacific Po no mu na ɛkɔ atifi fam kɔ ​​Arctic Po no mu, na ne kɛse boro kilomita ahinanan ɔpepem 9.98 (akwansin ahinanan ɔpepem 3.85), na ɛma ɛyɛ ɔman a ɛto so abien a ɛso sen biara wɔ wiase nyinaa wɔ ne kɛse nyinaa mu. Ne hye a ɛne United States wɔ anafo fam ne atɔe fam, a ne tenten yɛ kilomita 8,891 (akwansin 5,525) no ne asase so hye a ɛware sen biara wɔ wiase. Canada ahenkurow ne Ottawa, na ne nkurow akɛse abiɛsa ne Toronto, Montreal, ne Vancouver.
Abibifo akɔ so atra baabi a mprempren wɔfrɛ hɔ Canada no mfe mpempem pii ni. Efi afeha a ɛto so 16 no, Britania ne Franse akwantufo hwehwɛɛ mmeae ahorow na akyiri yi wɔtraa Atlantic mpoano. Esiane akodi ahorow a efii mu bae nti, ɛkame ayɛ sɛ France de n’atubra aman a ɛwɔ Amerika Atifi fam no nyinaa mae wɔ 1763. Wɔ 1867 mu, bere a Britania Amerika Atifi fam atubra aman abiɛsa a ɛnam Apam no so yɛɛ biako no, wɔhyehyɛɛ Canada sɛ ɔman no tumidi a amantam anan wom. Eyi fii ase maa amantam ne nsasesin a ɛdɔɔso ne ɔkwan a wɔfaa so maa ahofadi a efi United Kingdom hɔ no yɛɛ kɛse. Wɔde Westminster Mmara 1931 no sii ahofadi a ɛretrɛw yi so dua na ɛbaa awiei wɔ Canada Mmara 1982 a ɛmaa mmara kwan so ahofadi a ɛde ne ho to United Kingdom Mmarahyɛ Bagua no so no mu nkae no mu.
Canada yɛ mmarahyɛ bagua demokrase ne mmarahyɛ bagua ahemman wɔ Westminster atetesɛm mu. Ɔman no aban panyin ne ɔman soafo panyin—a odi tumi esiane sɛ wotumi hyɛ Aban Asoɛe a wɔapaw no no mu ahotoso nti—na amrado panyin a ogyina ɔhene no ananmu, a ɔsom sɛ ɔman no ti no na ɔpaw no. Ɔman no yɛ Commonwealth ahemman na ɛyɛ kasa abien wɔ aban kwan so wɔ ɔman no gyinabea. Ɛka aman a ɛkorɔn sen biara wɔ amanaman ntam susudua a ɛfa aban no a ɛda adi pefee, ɔmanfo ahofadi, asetra pa, sikasɛm mu ahofadi, ne nhomasua ho no ho. Ɛyɛ aman a mmusuakuw ahorow gu ahorow na wɔn amammerɛ ahorow wom sen biara wɔ wiase no mu biako, na efi atubrafo pii a wofi aman afoforo pii mu bae. Abusuabɔ a ɛware na ɛyɛ den a Canada ne United States wɔ no anya ne sikasɛm ne ne amammerɛ so nkɛntɛnso kɛse.
Ɔman a anya nkɔso kɛse, Canada na ɛto so 24 wɔ sika a obiara nya no din mu wɔ wiase nyinaa ne nea ɛto so dunsia a ɛsen biara wɔ Nnipa Nkɔso Nkyerɛkyerɛmu no mu. Ne sikasɛm a ɛkɔ anim no ne nea ɛto so awotwe a ɛso sen biara wɔ wiase, na ɛde ne ho to n’abɔde mu nneɛma pii ne amanaman ntam aguadi nhyehyɛe ahorow a anya nkɔso yiye so titiriw. Canada yɛ amanaman ntam ne aban ahorow ntam ahyehyɛde anaa akuw atitiriw pii a Amanaman Nkabom, NATO, G7, Kuw a Ɛwɔ Du, G20, Ahyehyɛde a Ɛhwɛ Sikasɛm ne Nkɔso So (OECD), Wiase Aguadi Ahyehyɛde (WTO) ka ho no fã . , Amanaman Nkabom, Arctic Bagua, Organization internationale de la Francophonie, Asia-Pacific Sikasɛm mu Nkɔmmɔbɔ nhyiam, ne Amerika Aman Ahyehyɛde
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Canada&oldid=125163"
Nsesae ba kratafa yi so da 11 Ayɛwohomumɔ 2022, mmere 13:54.